Ikamu lasebusika eCanada - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Ikhempu yasebusika ye-Flap
Phila ubusika obuhle kakhulu bempilo yakho
I-FLAP WINTER Funda, Hlola, Thola nokukhula
I-FLAP WINTERFunda, Hlola, Thola nokukhula
Izinhlelo zasekamu laseBLI FLAP zinikeza umuzwa omuhle phesheya ohlanganisa ukufundwa kwesiNgisi nesiFulentshi ngezinto ezahlukahlukene ezijabulisayo endaweni ephephile nenakekelayo.
Ubude: amaviki 2 kuya ku-7
Usuku lokuqala: Disemba 19
Usuku lokuphela: NgoFebhuwari 6
Amakilasi ahambisana nezinkundla zokusebenzela. Bona khuthaza ukuzimela kwezilimi kanye nokuguquguquka. Ngokusebenzisana nabanye nabaholi bewebsite yabo, abafundi bazonikezwa iphrojekthi okumele iphothulwe isonto ngalinye futhi yethulwe ngoLwesihlanu.
UFête des Neiges
Isampula Yamaholide e-Impelasonto (uhlelo luyehluka):
IQuebec City neHôtel de Glace (1 Usuku)
Ukushushuluza (usuku 1)
Ukubamba (usuku olungu-1)
Isikhumulo sezindiza siyalulama